"Madaxweyne Trump Anshax Madaxweyne Malaha" Agaasimihii Hore Ee Hay'adda Dembibaadhista Maraykanka Ee FBI-da James Comey
Monday April 16, 2018 - 13:43:51 in Wararka by Abdi A.
Washinton-(Caalami-News)- Agaasimihii hore ee hay'adda dambibaadhista Maraykanka ee FBI James Comey ayaa sheegay "in Trump uusan lahayn anshax madaxweyne", uuna dumarka ula dhaqmo "sidii cadad hilib ah"
Comey ayaa hadalkaas ka sheegay waraysigiisii u horreeyay ee uu telefishin wayn siiyo tan iyo markii uu madaxweyne Trump shaqada ka eryay sannadkii hore.
Telefishinka ABC News ayuu u sheegay in Trump uu si joogto ah been u sheego, lagana yaabo in uu carqaladeeyay caddaaladda.
Saaco ka dib markii uu waraysigaasi baxay, madaxweyne Trump ayaa weerar rogaal celis ah soo qaaday isaga oo Comey ku eedeeyay "in uu been badan sheegay".
"Igama gadmayso in la dhoho maskaxiyan ayuu u liitaa Trump ama waxaa si sahlan u haya xannuunka asaasaqa" ayuu Comey u sheegay barnaamijka 20/20 ee telefishinka ABC.
"Ilama aha in uu qabo xannuun dhanka jirka ah oo madaxweynenimada ka hor istaagi, balse ma laha anshax madaxweyne".
"Waxaa waajib ah in madaxweyneheenu uu astaaan u noqdo ixtiraaamka uuna raaco qiyamka aasaaska u ah dalka. Arrintaasna waxaa ugu muhiimsan runta. Madaxweynahanna arrintaas ma awoodo." Ayuu Comey hadalka ku sii daray.
Waraysigaas ka dibna Xisbiga Jamhuuriga ayaa soo saaray war qoraaal ah oo ay ku sheegeen "in waxa kali ah ee ka daran taaariikhda dhaqan xumo ee Comey ay tahay sida uu u doonayo in uu waxkaste ugu sameeyo suuqgaynta buugaagtiisa".
Lahaanshaha sawirkaREUTERS Image captionComey ayaa agaasime noqday sannadkii 2013kii markaas oo uu xilka madaxweynenimada hayay Obama